ခိုင်ရွှေဝါမြအခက် ကြွေရက်တယ်စော - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
အချိန်မှာ 1938 ခုနှစ် ဖြစ်ပေသည်။
ရေနံမြေသပိတ် တပ်မတော်ကြီး ရန်ကုန်မြို့တော် သို့ချီတက်သွားသည်မှာ ရက်သတ္တပတ်ပင် ပြည့်မြောက်ခဲ့သည့် အချိန်ပင် ဖြစ်ပေသည်။ ရေနံမြေ မြို့တော်၏ အရှေ့ဖျား ရွာစုလေးဝယ် တပ်မတော်ကြီးနှင့် တပါတည်း ချီတက်သွားကြပြီဖြစ်သော အိမ်ရှင်ယောက်ျားများ မရှိသလောက်ပင် ဖြစ်သဖြင့် မိန်းမသား ချည်းသာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီဖြစ်ရကား ခြောက်သွေ့၍ နေပေသည်။
ရွာဖျားထိပ်တွင် အထီးကျန်ဘဝ ပမာ ဆောက်လုပ်ထားသည့် တဲငယ် တစ်လုံးအတွင်းဝယ် တစ်ချက် တစ်ချက် ဝှေ့ယမ်းတိုက်ခတ်လိုက်သည့် လေ၏ လှုပ်ရှုားမှုကြောင့် လင်းတခါ မှုံတလှည့်ဖြင့် ညိမ်းလုညိမ်းဆဲ မီးရောင်အောက်တွင် ခံစားနေရသည့် ဝေဒနာကြောင့် မချိမဆံ ညဉ်းညူ နေသည့် လူမမာ၏ ဘေးတစ်ဘက်တစ်ချက်တွင် စိုးရိမ်ခြင်း ကြီးစွာဖြင့် ကြည့်နေသည့် အသက် ၃၅ နှစ် မိန်းမတစ်ယောက်နှင့် အသက် ၁၇ နှစ်ခန့် မိန်းမပျိုလေး တစ်ယောက်တို့ ဖြစ်ကြသည်။
“ကိုထွန်းခင် ရှင်တော်တော်ဘဲ အခံရခက်နေသလားဟင် “
ထိုလူမမာ၏ ဇနီးက ဘေးမှာစောင့်၍ ထိုင်ကြည့်ရင်း ဂရုဏာသက်စွာ မေးမြန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။
“အေးကွယ်….. ငါ့ရင်ထဲမှာ ဘလောင်ဆန်နေတာပဲ ထားခင်ရယ် ”
လူမမာသည် လွန်စွာအားအင် ရုတ်လျော့သော လေသံဖြင့် ဖြေကြား၏ ။
“ဟုတ်မှာပဲ နှင်းဥ ရယ် ၊ သူ့ခမျာ ဘာမှမစားနိုင်တာ ၃-၄ ရက်ရှိနေပြီ ဒီတော့ ဘယ်မှာ နေသာထိုင်သာ ရှိပါ့မလဲ ”
မိခင်လုပ်သူက ဖခင်လူမမာအား ဂရုဏာ သက်ဖွယ် စကားပြောကြားနေသည်ကို မျက်ရည်ဝိုင်း၍ နားထောင်နေရှာသည့် မိန်းမပျိုလေးမှာ ဖခင်လူမမာအားတလှည့် မိခင်အားတလှည့်ကြည့်ကာ မိမိတို့၏ ဘဝကို စဉ်းစားမိကာ ကြေကွဲဝမ်းနည်းနေမိပေသည်။
သူမအဖို့ ဝမ်းနည်းမည်ဆိုက ဝမ်းနည်းထိုက်ပေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူမဖခင် ကျန်းမာစဉ်က ရိုးသားကြိုးပန်းစွာ လယ်သူရင်းငှား အဖြစ် တမိုးလောက် အပင်ပန်းခံ၍ လုပ်လိုက်ပါက ကြွယ်ဝချမ်းသာ၍ မလာသော်လည်း အငတ်ငတ် အပြတ်ပြတ် မဖြစ်နိုင်ပေ။ ယခုတော့မူ မိမိဖခင် အိပ်ယာထက် ဘုန်းဘုန်းလဲသည်နှင့် စားရမဲ့ ဘဝသို့ တမဟုတ်ချင်း ရောက်ခဲ့ရပေသည် ။ အနှီသို့ အငတ်ဘေးပြသနာနှင့် ရင်ဆိုင်ရခြင်းမှာလည်း မမျှတသော ဝင်ငွေဖြင့် လုပ်ရင်းကိုင်ရင်း စားရင်းသောက်ရင်း စုဆောင်းရန်ဟူ၍ ငွေပိုငွေလျှံ တပြားတချပ်မှမကျန်ရှိပေ။
သူတို့ အိမ်ထောင်စုလေး၏ ရင်ဆိုင်ရမည့် ပြသနာမှာ အငတ်ဘေးနှင့် အိမ်ထောင်ဦးစီး ဖြစ်သည့် ကိုထွန်းခင်အား ဆေးဝါးကုသရန် ဖြစ်ပေသည်။ သို့ပါသော်လည်း ပြေးရန်လည်း မြေမရှိ ၊ ပေးရန်လည်းငွေမရှိ ဆိုသကဲ့သို့ ဆေးဝါးကုသရန်ဝေးစွ ၊ စားရန် ဆန်နှင့်ငါးပိလေး မျှပင် မရှိရှာကြပေ ။
“သမီးရယ် … ညီးအဖေကို ဆန်ပြုတ်လေးဖြစ်ဖြစ် တိုက်ရအောင်ကွယ်”
သမီးဖြစ်သူက မီးဖိုချောင်ဘက်သို့ ထထွက်သွားသည်ကို မထားခင်သည် နောက်မှလိုက်လာရင်း လူမမာ မကြားစေရန် လေသံဖြင့်
“သမီး ဆန်အိုးထဲမှာ ဆန်လည်း တစ်စေ့မှ မရှိတော့ဘူး။ ငါ အရီးမှုံတို့ဆီသွားပြီး တစ်ခွက်လောက် ချေးကြည့်ဦးမယ် ”
ဟုပြောကာ အိမ်မှထွက်ခဲ့ပေသည်။ အမှန်မှာ မထားခင်သည် အရီးမှုံထံမှ ဆန်တခွက် ချေးမည်ဟူ ၍သာ ထွက်ခွာလာရသော်လည်း အရီးမှုံမှာ မုဆိုးမ တစ်ယောက်မျှသာ ဖြစ်ချေသည် ၊၊ အခန့်ပင် အရီးမှုံအား တဲရှေ့တွင် တွေ့ရသဖြင့်
“အရီးမှုံ ဆန်ရှိသေးရင် တစ်ခွက်လောက် ချေးပါဦး၊ ကိုထွန်းခင်လဲ အိပ်ယာက မထနိုင်သေးဘူး အရီးမှုံ”
ဟု မထားခင်သည် မျှော်လင့်ကြီးစွာ ဖြင့်ချေးငှားလိုက်ပေသည် ၊၊
“အဲဒါမှ ဒုက္ခဘဲ ထားခင်ရယ် ငါလဲမနေ့ကတည်းက ညီးကို ဆန်နှစ်ခွက်ပေးပြီး ကျန်တဲ့ဆန်လေး ချက်စားလိုက်လို့ ကုန်ပါပြီကော”
အဖွားအို စိတ်ပျက်လက်ပျက် ညီးတွားလိုက်သည်။ ပါးစပ်အဟောင်းသားနှင့် ထားခင်မှာ နားထောင်နေမိ၏။ သူမ မျှော်လင့်ကြီးစွာဖြင့် ချေးမည်ဟု ရည်မှန်းထားခဲ့သည့် အရီးမှုံပင် ငတ်ပြတ်ခြင်းဘေးဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရပါပြီကော၊၊
အရီးမှုံထံမှ မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့သဖြင့် မထားခင်သည် ရွာလယ်ပိုင်းမှ ရေနံအလုပ်သမားကြီး ကိုနေဝင်းတို့ အိမ်ဘက်သို့ လှည့်လာခဲ့ပြန်ရ၏။ အချေးအငှား လာရောက်ရသူ မထားခင်မှာ ကလေးများ ငိုယိုရိုက်နှက်သံနှင့်အတူ ကိုနေဝင်း၏မယား မလှ ၏ ကြိမ်ဆဲသံကိုပါ ကြားနေရသဖြင့် ကမ္ဘာမီးလောင်ရသည့်အထဲ ဆီမီးဝင်မတောက်ချင်သဖြင့် ပြန်လှည့်ခဲ့ရပေသည်။ သူမ အဖို့ တစ်ခွက်မျှသော ဆန်ရရှိရေးအတွက် မျှော်လင့်ချက်ကား ကုန်ဆုံးခဲ့ချေပြီ၊၊
ဆန်-ထင်း-ကျွန်းသစ်နှင့် မြေထွက် သဘာဝပစ္စည်းများ ပြည့်ဝ ကုန်လုံသည် ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်မှာ မထားခင် ကဲ့သို့သော လူတန်းစားများအတွက် ရယ်ဖွယ်ကောင်းသော ပုံပြင်တစ်ခုကဲ့သို့ ဖြစ်နေပေ၏။ နေထွက်မှနေဝင် ၊ နွားနှင့်အတူ ရုန်းကာ ပင်ပန်းကြီးစွာဖြင့် လုပ်ကိုင်ရှာဖွေခဲ့ရသူ အလုပ်ကြမ်းသမားကြီး ကိုထွန်းခင်မှာ သူ၏ အိမ်ထောင်အတွက် မငတ်ရုံသာ ရှာဖွေကျွေးမွေးနိုင်ခဲ့၏။ ယခုကဲ့သို့ အိပ်ရာထက်တွင် လူမမာကြီးတစ်ယောက်အဖြစ် ဘုန်းဘုန်းလဲရသည့် အချိန်တွင်မူ စားစရာဟူ၍ ဆန်စေ့တစ်စေ့မျှပင် မရှိရှာတော့ပေ၊၊
ချေးငှားမည့်သူ ကယ်တင်ရှင်ဟူ၍ ရွာထဲတွင် မရှိသလောက်ရှားပေသည် ၊၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အများစု လူဦးရေမှာ ရေနံစက်ပေါ် မှီခိုနေကြသူများဖြစ်၍ ယခုကဲ့သို့ ရေနံမြေသပိတ်ကြီး ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သောအခါ သူတို့အားလုံးသည် ရေနံမြေသပိတ် တပ်မတော်သားများအဖြစ် ကူးပြောင်းလာရပေသည်၊၊
နိုင်ငံရေး တရပ်အနေဖြင့် အောင်မြင်မှု ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့၏ ဝမ်းရေးမှာမူ ကျဆုံးနေရပေပြီ ၊၊ ရေနံမြေရှိ အလုပ်သမားများ၏ သားငယ် သမီးငယ်နှင့် အိမ်ထောင်သည် မိန်းမသားများ၏ ငတ်မွတ် ငိုယိုညီးတွား နေကြသည့် အသံသည် အဝီစီ ပွက်သကဲ့သို့ ဖြစ်နေပေသည်။ ရွာတဘက်များမှ တဘက်ဖျားသို့ ရောက်သည့်တိုင် ဆန်ချေးငှားမည့်သူအား မျှော်လေတိုင်း ဝေးခဲ့သည့် မထားခင် ခင်မျာမှာ အိမ်ဘက်သို့ တပ်ဆုတ်ရမလို ဖြစ်နေ၏ ၊၊ သို့ပါသော်လည်း သူမအဖို့ အိမ်သို့ လက်ချည်းသက်သက် ပြန်ရမည်ကို သေရမလောက် ကြောက်ရွံ့လာခဲ့ပေသည်၊၊
အစားအစာဟူ၍ တစ်စက်မျှ မရှိရှာသော ခင်ပွန်းသည် ကိုထွန်းခင်၏ မချိတင်ကဲ ညီးညူသံသည် သူမ၏ ရင်အား ကွဲစေမတတ် ဖြစ်မိ၏ ၊၊ ထို့ပြင် စားနိုင်သောက်နိုင် အပျိုရွယ်လေး နှင်းဥမှာလည်း ထမင်းမစားရ၍ အဘယ်မှ ဆာလောင်နေမည်ကို တွေးမိသေး၏ ၊၊
ရွာစွန်တောင်ပိုင်းသို့ ရောက်လာခဲ့သော မထားခင်၏ ခြေလှမ်းသည် ခန့်ညားသော အိမ်တစ်ဆောင်ရှေ့သို့ ရောက်သောအခါ တန့်သွားပေသည်၊၊ သူမအနေဖြင့် နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ပင် ဖြစ်ပေသည်၊၊ သို့ဖြင့် သူမသည် အိမ်ဝင်းထဲသို့ မရဲတရဲ လှမ်းဝင်လာခဲ့လေသည်။ ဝင်းခံတံခါးမှာ အတွင်းမှ ပိတ်ထားသဖြင့် လှမ်း၍ခေါ်သဖြင့် အထဲမှ ကုလားလေးတစ်ယောက် လာဖွင့်ပေးပေသည်၊၊
“ဟဲ့… ကောင်လေး ၊ အာမက်ရှိသလား”
“ရှိတယ် .. အစ်မ”
ဟုပြောကာ ခြံဝင်းထဲသို့ ဝင်လာခဲ့ပေသည် ၊၊ သူမ ဧည့်ခန်းထဲသို့ ရောက်သောအခါ အသားမဲမဲ ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း ကုလားတစ်ယောက် အတွင်းခန်းမှ ထွက်လာ၏ ၊၊
“သြော် … အစ်မကြီးပါလား ၊ ဘာကိစ္စပါလဲ”
“သြော် …. အင်း…. ကိစ္စရှိလို့ပေါ့ အာမက်ရယ် ၊ မင်းအစ်ကိုလည်း တော်တော်မမာနေဘူး၊ အဲဒါ ဒို့များကို ငွေလေးဘာလေး ချေးစမ်းပါဦး၊ မင်းအစ်ကို အလုပ်ဝင်ဝင်ချင်း ပြန်ဆပ်ပါ့မယ်”
မထားခင်သည် မျှော်လင့်ကြီးစွာဖြင့် အခန့်သား ကုလားထိုင်ပေါ်တွင် ထိုင်နေသော အာမက်အား တောင်းပန်လိုက်သည်၊၊
“ကျတော် အစ်မကြီးကို ကူညီချင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အလုပ်အကိုင်တွေက မကောင်းဘူးဆိုတာ အစ်မကြီးလည်း သိသားဘဲ”
ရေနံမြေမြို့တော်သို့ လူမှန်းသိသည့် အရွယ်မှ ရောက်ကာ ငွေတိုးချခြင်းဖြင့် ကြီးပွားလာခဲ့သော ခေါ်တောပေါက် အာမက်သည် မြန်မာရည်လည်စွာ ဆင်ဝှေ့ရန်ရှောင် ငြင်းလိုက်ပေသည်။
“အေးပါဟယ် .. အာမက်ရယ် ၊ ငါလဲသိပါတယ် ၊ ခက်တာက မင်းအကိုကြောင့်ပါဟယ် များများလည်း မဟုတ်ပါဘူး ၊ ဆီဖိုး ဆန်ဖိုး လောက်ပါဘဲ”
“ခက်တယ် … .အစ်မကြီး အခုသပိတ်မှောက်လို့ ကျတော် ငွေနှစ်ထောင်လောက် ဆုံးနေတယ် ၊ ဒါကြောင့်ပါ အရင်က ကျတော် ငြင်းဖူးလို့လား”
ခက်သည် ယခုမှခက်သည် ၊ မထားခင်အဖို့ လဲ၍ သာ သေလိုက်ချင်၏ ။ တဖက်တွင် စီးပွားပျက်ကပ်ခေတ် အခြားတဖက်တွင် လူမမာ လင်သား ၊ အဘယ်ကဲ့သို့ ဆန်ဘိုးလေးလောက်ကိုပင် ရှာဖွေရမည်နည်း ၊ ယောကျ်ားသား ဖြစ်ခဲ့ပါမူ ၊၊ အားနွဲ့သော မိန်းမသား
“အာမက်ရယ် အစ်မကိုတော့ ဒီတခါကြည့်ပါဦး ဟယ်”
ဟု မျက်ရည်ဝိုင်း၍ ပြောရှာပေသည် ။ အာမက်သည် ထိုင်ရာမှ ထလိုက်သည်။ ဧည့်ခန်းတွင် ခေါက်တုန့် ခေါက်ပြန်လျှောက်နေ၏ ။
“ကျတော် မတက်နိုင်လို့ပါ အစ်မကြီးရယ်”
မထားခင် အဖို့ကား မျှော်လင့်ချက် ကုန်ဆုံးခဲ့ပေပြီ ။ စိတ်ပျက်စွာဖြင့် ထိုင်ငိုင်နေသော မထားခင်သည် အိမ်ပြန်တော့မည်ဟု ထလိုက်သည် ။ ထိုအချိန်တွင် ခန်းစီးအားမ၍ ထွက်လာသော မုတ်ဆိတ် ဗရဗွဖြင့် ခေါ်တော ကုလား ထွက်လာသည်ကို တစ်ချက်မျှ ကြည့်လိုက်မိ၏ ။ ထိုကုလားမှာ အသက် ၄၀ ခန့်ရှိ၍ အာမက်ကဲ့သို့ပင် မျက်နှာလည်း ဆင်၍ ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း ဖြစ်၏ ။ ထိုကုလားကပင် အာမက်အား ယင်းတို့ ဘာသာစကားဖြင့် လှမ်းပြောလိုက်သည်ကို ခေတ္တမျှ နားထောင်ပြီး
ဟု လှမ်း၍ ဟန့်တားလိုက်သဖြင့် မထားခင်မှာ ပြန်၍ ထိုင်ရပေသည် ။
“ဒါ ကျတော့် ဦးလေးပဲ … အစ်မကြီး ၊ သူမနေ့က မှ ဘင်္ဂလားက ရောက်တယ် ၊ အဲဒါ သူကပြောတယ်”
“အစ်မကြီးကို ပြောရမှာခက်တယ် အစ်မကြီး ၊ ဒါပေမယ့် ကျတော့် ဦးလေးက အစ်မကြီးကို အင်မတန် သနားလို့ ပြောခိုင်းနေတယ်”
“ဘာများ လဲကွယ် အာမက်ရယ် ပြောစမ်းပါဦး ”
အာမက်သည် တစ်ချက်မျှ တွေဝေသွားပြီး ဆက်၍
“ကျတော်ပြောတာ စိတ်မဆိုးရင်တော့ ကျတော်ပြောပြပါ့မယ် နောက်ပြီး ကျတော်ပြောတာကို ကျတော်ရယ် ဦးလေးရယ် အစ်မကြီးရယ် ဒီသုံးယောက်ပဲ သိစေချင်ပါတယ်”
ယခုကဲ့သို့ လျှိူ့ဝှက်ရမည့် အကြောင်းအရင်း ရှိနေသည့် လုပ်ငန်းဟူ၍ သိရှိလာသော မထားခင်သည် မျက်လုံးပြူးရပြန်၏ ။
“ဘယ်လို အကြောင်းအခင်းများလဲကွယ်၊ မင်းပြောတဲ့ ကိစ္စက အစိုးရ မင်းဘေး မကင်းတဲ့ ဟာများလား”
အာမက်သည် ရိုးသားလှသော မထားခင်အား ကြည့်၍ ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်သွမ်းလိုက်ရင်း
“ကျတော် ပြောတာက ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကဲ အစ်မကြီး စိတ်မဆိုးနဲ့နော် ၊ ကျတော့် ဦးလေးက … ဟဲဟဲ.. အစ်မကြီးကို မြင်မြင်ချင်း မျက်စေ့ကျလို့ ပြောပေးပါတဲ့”
မထားခင်သည် အာမက်ပြောစကား ကြားလိုက်ရသည်မှာ နွေခေါင်ခေါင် လျှပ်လက်၍ မိုးကြိုးပစ်လိုက်သည်ဟု ထင်မိပေ၏ ။ သူမ တကိုယ်လုံးမှာ ဒေါသဖြင့် တုန်လှုပ်နေရှာ၏ ။
“ဘာ ဘာပြောတယ် ၊ အာမက် နင်… နင်သိတယ် မဟုတ်လား ငါ့ဟာ လင်နဲ့သားနဲ့ ဆိုတာ”
မထားခင်မှာ ဒေါသဖြစ်လွန်းသဖြင့် အထစ်ထစ် အငေါ့ငေါ့နှင့် ရန်တွေ့မိ၏ ။
“အစ်မကြီးကို စိတ်မဆိုးဘို့ ကျတော် အစကတည်းက တောင်းပန်ထားတယ် ၊ ဒါအစ်မကြီးစဉ်းစားဖို့ပါ ၊ အခုအစ်ကိုမမာဘူးဆိုလို့ ကျတော်က ကြားက ဝင်ပြောမိတာ ၊ အခုကိစ္စက အစ်မကြီးသာ ဦးလေးပြောသလို နားထောင်မယ်ဆိုရင် အစ်မကြီးရဲ့ အိမ်ထောင် ကောင်းစားဘို့ပဲလေ၊ အစ်ကို့ကိုဆေးကုဖို့ ငွေရမယ် ၊ အစ်မကြီးဟာ အိမ်ထောင်သည် ၊ မိခင်တယောက်ပဲ ဦးလေးပြောတာ နားထောင်လို့တော့ ဘာမှနစ်နာဖို့ မရှိဘူး ၊ဒါကြောင့် ကျတော်ပြောတာ လူသိခံဘို့ မလိုဘူးလို့”
သွက်လိုက်စွာ မြန်မာစကားဖြင့် တတွတ်တွတ် ပြောနေရှာသည့် အာမက်၏ စကားများကို မထားခင်သည် နားထောင်နေမိ၏ ၊၊ ထိုသို့ နားထောင်ရင်း မျက်ရည်များကလည်း တပေါက်ပေါက် ကျဆင်းနေပေသည် ။ ယခုလို အချိန်မျိုးတွင် ယခုကဲ့သို့ အပြောခံရခြင်းသည် အလွန် စိတ်ထိခိုက်မိ၏ ။ လူသိရှင်ကြား စော်ကားမှုအား တိုင်ကြားပါက မိမိသာ အစော်ကားခံရသဖြင့် အရှက်ကွဲရပေမည် ။
ထို့ပြင် အိပ်ယာထက်တွင် ငတ်ပြတ်နေသော လူမမာသည် ၊ လင်သား ၊ မိမိတို့၏ အငတ်ပြသနာအား လွတ်ကင်း လွတ်မြောက်ရန်မှာ အခြားသောနည်းဖြင့် ရွှေပြည်တော် မျှော်လေတိုင်းဝေးသာ ဖြစ်ပေ၏ ။ အထူးသဖြင့် သူမ၏ စိတ်ကို ပိုမို ထိခိုက်စေသည်မှာ သူမ၏ ချစ်လင် ကိုထွန်းခင် အတွက်သာ ဖြစ်ပေသည် ။ လူလားမြောက်၍ အရွယ် ရောက်ကာ မိမိနှင့် ပုဆိုးတန်းတင် အကြင်လင်မယားအဖြစ် ပေါင်းသင်းလာသည့်အချိန်မှ ယခုတိုင် ရိုးသားစွာ လုပ်ကိုင်ရှာဖွေ ကျွေးမွေးလာသော ကျေးဇူးရှင်လင်သား ၊ သစ္စာရှိချစ်လင်အား မမာကျန်းသော အချိန်တွင် အသက်ဆုံးရှုံး ခံစေရမည်မှာ သူမအဘို့ တာဝန်မကင်းပေ ။
သို့ဖြစ်၍ သူမအဘို့ အာမက် ပြောသလို လိုက်နာရမည်ကဲ့သို့ပင် ဖြစ်နေ၏ ။ လူရည်ပါးနပ်လှသော အာမက်သည် မိမိ၏ ပစ်ကွင်းသို့ မထားခင်တစ်ယောက် ယိမ်းယိုင် ဝင်ရှာလာသည့် အရိပ်အယောင်ကို တွေ့ရှိလျှင်ပင်
“အစ်မကြီးကို ကျတော် ခင်လို့ပြောနေတယ် ဆိုတာ ယုံစမ်းပါ ၊ အခုကိစ္စကို ဘယ်သူမှ သိဘို့မလိုဘူး ။ နောက်ပြီး အစ်မကြီးက အပျိုရွယ်လေးလဲ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီတော့ ဦးလေး အလိုကို လိုက်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ အစ်မကြီး အိမ်ထောင်ရေးဟာ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်”
မထားခင်အဘို့ အခြားရိုးသားသော နည်းဖြင့် လိုနေသော ငွေနှင့် အစားအစာရရှိရန်မှာ မျှော်လင့်ချက် မရှိတော့ပေ ။ မိမိ၏ ခန္ဒာကိုယ်အား အညစ်စွန်းခံ လိုက်ခြင်းဖြင့် မိမိချစ်လင်၏ အသက်အား ကယ်တင်နိုင်ပေမည်။ သူမ ယခုကဲ့သို့ ငိုင်နေခြင်းသည် မိမိ၏ ဆင်လိုက်သော အကွက်ထဲသို့ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီး မိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်လိုက်သော အာမက်သည် သူ၏ ဦးလေးအား မျက်စိမှတ်ပြကာ
“ကဲ အစ်မကြီး အချိန်ကုန်လို့ အစ်ကို့အတွက် စိတ်မချရဖြစ်နေမယ် သီးလေးနဲ့ အိမ်ထဲ ခဏလေး လိုက်သွားလိုက်နော်”
အာမက်သည် ပြောပြောဆိုဆို အိမ်ပေါ်မှ ခြံထဲသို့ ရှောင်၍ ဆင်းသွား၏ ။ အာမက်ခြံထဲ ဆင်းသွားသည်နှင့် သူ၏ ဦးလေးသည် မထားခင် ထိုင်နေရာသို့ ချဉ်းကပ်လာကာ………
“ချိတ်မချိုးပါနဲ့ ချနော် ခင်ဗျားကို သနားတယ် ၊ ချိတယ်”
ဟုပြောကာ မထားခင် ၏ လက်မောင်းအား ဆုတ်ကိုင်ကာ ဆွဲထူလိုက်၏ ။ မထားခင်သည် ရှက်ခြင်း ၊ ဒေါသထွက်ခြင်းနှင့် ယူကြုံးမရ ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် မျက်နှာ လက်ဝါးနှင့်အုပ်ကာ ရှိုက်ကာငိုကြွေးမိ၏ ။ ငိုကြွေးရင်းဖြင့် သူမသည် ခေါ်တော ကုလားကြီး၏ ခေါ်ဆောင်ရာသို့ လိုက်ပါခဲ့ရ၏ ။ လက်ဖဝါးနှင့် အုပ်၍ ငိုကြွေးနေသဖြင့် သူမအား အဘယ်သို့ ခေါ်ဆောင်လာသည်ကိုပင် မမြင်ရသော်လည်း သူမအား ဆွဲ၍ ထိုင်ခိုင်းလိုက်မှပင် လက်ကိုဖယ်၍ ကြည့်ရှုမိ၏ ။ ခန့်ညားခိုင်ခန့်လှသည့် ကုတင်နှင့် တောင်ဆုပ်မျှ ထူထဲသော မှို့ယာ အခင်းအကျင်းများကို အံ့သြစွာ တွေ့ရပေသည် ။
သူမ၏ တကိုယ်လုံးမှာ နတ်ဝင်သူပမာ တုန်လှုပ် နေ၍ အသိစိတ်မှာလည်း အိပ်မက်ထဲ လမ်းလျှောက်နေရသူကဲ့သို့ ဖြစ်နေ၏ ။ မချိတင်ကဲ ဖြစ်လွန်းသဖြင့် မထားခင်သည် ကုတင်ပေါ်တွင် တစောင်းလှဲကာ မျက်နှာအုပ်၍ ငိုကြွေးပြန်တော့သည် ။ အတန်ကြာ ငိုကြွေးပြီး၍ ရှိုက်နေစဉ် သူမ၏ ဂုတ် ပေါ်တွင် ယားကျိကျိရှိသည်နှင့် မျက်နှာမော်ကြည့်လိုက်သောအခါ သူမ၏ ဦးခေါင်းတည့်တည့်အား မိုးကြိုးပစ်ခွင်းခံလိုက်ရသကဲ့သို့ များစွာ တုန်လှုပ်မိ၏။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အဝတ်ဟူ၍ ဗလာနတ္တိဖြင့် မားမားကြီးရပ်ကာ သူမ၏ ဂုတ်အား နမ်းရန် ငုံနေသော ကုလားကြီးအား တွေ့ရှိရသောကြောင့် ဖြစ်၏ ။ အထူးသဖြင့် သူမအား အလွန်တုန်လှုပ်စေသော အရာမှာ သူမ၏ မျက်နှာနှင့် နီးကပ်နေသည့် တောင်းတင်းလှသော ပေါင်ဂွဆုံရှိ အမွှေးပလပွ အလည်မှ ငေါ့ငေါ့နှင့် အစွမ်းကုန် တောင်လျက်ရှိသော မြင်း၏ တန်ဆာပမာ ကြီးမားတုတ်ခိုင် ရှည်လျားလှသော လီးချောင်းကြီးသာ ဖြစ်ပေသည်။
သူမအဘို့ ကိုထွန်းခင်နှင့် အကြင်လင်မယားအဖြစ် ပေါင်းသင်းကာ သမီးနှင်းဥလေးကို မွေးဖွား၍ အပျိုအရွယ် ရောက်လာခဲ့သည့်တိုင် ကိုထွန်းခင်၏ တန်ဆာခေါ် လီးအား သေချာ တခါမှ မကြည့်ခဲ့မိပေ။ ရှက်ကြောက်ခြင်းကြောင့် အကြင်လင်မယားအဖြစ် အတူအိပ်ချိန်တွင် မီးခွက်မှုတ်၍ အိပ်လေ့ရှိခဲ့သည် ။ ထို့ကြောင့် မိမိလင်သား ကိုထွန်းခင်က အပေါ်မှခွ၍ မိမိအခေါင်းထဲသို့ သွင်းလိုက်ခြင်း၊ ညှောင့်ခြင်းကိုခံကာ မိမိပါ ကိစ္စပြီးစီးခဲ့သည်သာ ဖြစ်ခဲ့၏။
ယခုကဲ့သို့ နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ကြီးမားတုတ်ခိုင် ထွားကြိုင်းလှသည့် ငပဲကြီးအား တွေ့ရှိလိုက်ရသော မထားခင်သည် ယင်းမျှ ကြီးမားလှသည့် လီးချောင်းကြီးသည် မိမိ၏ ပေါင်ရင်း ခွဆုံရှိ စောက်ခေါင်းလေးအား အဘယ်ကဲ့သို့ ဝင်နိုင်မည်နည်းဟု အတွေးရောက်မိ၏။ သူမ၏ အတွေးထဲတွင် စမ်းတဝါးဝါးနှင့် ချစ်ခဲ့ ၊ လိုးခဲ့ ၊ ညှောင့်ခဲ့ သည့် မိမိ၏ လင်တော်မောင် ကိုထွန်းခင်၏ ငပဲထက် ကုလားကြီး၏ လီးချောင်းကြီးမှာ နှစ်ဆမျှပို၍ ကြီးမား ရှည်လျားသည် ဟူ၍ သိခဲ့ပါမူ အိမ်ထဲမှ ထွက်ပြေးမည်လော မပြောတတ်ပေ …….။
ကိုယ်လုံးတီးဖြင့် မတ်မတ်ရပ်ကာ ကြည့်နေသည့် ကုလားကြီးသည် မထားခင်၏ အနားသို့ ပိုမိုတိုးကပ်လာကာ သူမအား ပွေ့ဖက်ပြီး ကုတင်ပေါ်သို့ တွန်းလှဲလိုက်၏ ။ မထားခင်တစ်ယောက် ကုတင်ပေါ် ပက်လက်လန်၍ လဲသွားသည်နှင့် ကုလားကြီးသည် သူမ၏ ထမီအား အောက်မှပင့်၍ လှန်လိုက်သည် ။
မထားခင်သည် ရုတ်တရက်မို့ “အို” ဟူ၍ ထမီကို ပြန်ဖုံးရန် ကြိုးစားရှာသေးသည် ။ သို့သော် သူမ နောက်ကျခဲ့လေပြီ ။ သူမ၏ ထမီမှာ ရင်ဝပေါ်သို့ ရောက်ကာ ဖြောင့်တန်း ဖြူဖွေးသော ပေါင်တွင်းသားများမှာ နှစ်လိုဖွယ်ရာ တုပ်တုပ်ခဲခဲနှင့် ပေါင်ဂွဆုံအလယ် ဗဟိုတွင်မူ အမွှေးဖုံးအုပ်ကာ ဖောင်းကြွနေသော စောက်ဖုတ်မှာ အပေါ်မှစီး၍ နီးကပ်စွာ ငုံ့ ကြည့် နေသည့် ကုလားအား သွားရေတမြားမြား ကျစေ၏။
ခေါ်တောကုလား ဖြစ်ရသည့်အပြင် မြင်တွေ့နေရသော မုန့်ပေါင်းပမာ ဖောင်းကြွ နေသည့် စောက်ခုံမှာ မက်မောစရာ ဖြစ်ရကား ကုလား၏ မျက်နှာမှာ မထားခင်၏ ပေါင်ဂွ ဆုံသို့ တစထက်တစ နီးကပ်လာကာ နောက်ဆုံးတွင် သူ၏ မုတ်ဆိတ်မွှေးများသည် မထားခင်၏ စောက်မွှေးများဖြင့် ရောထွေးသွားကာ တက်ကြွလာသော ကာမအရှိန်ကြောင့် တဆပ်ဆပ် တုန်နေသော နှုတ်ခမ်းမဲကြီးသည် ပေါင်စေ့ထားသဖြင့် အကွဲရာလေးမျှသာ ပေါ်နေသော သူမ၏ စောက်ပတ်ကြားလေးပေါ်တွင် ဂဟေဆက်မိလျက်သား ဖြစ်သွား၏ ။
မထားခင်အဘို့ ကိုထွန်းခင်က မည်သည့်အခါမှ မလုပ်ခဲ့ဘူးသဖြင့် ယောင်ယမ်းကာ “အို” ဟူ၍ လွှတ်ခနဲ ထွက်သွား၍ ကုလားကြီး၏ မျက်နှာကို တွန်းပစ်မိ၏ ။ သို့သော် တဏှာ၏ ကျေးကျွန်ဖြစ်နေသည့် ကုလားသည် မထားခင်၏ ပေါင်နှစ်လုံးအား ဆွဲယူလိုက်ကာ တဘက်တချက်သို့ ဆွဲဟ လိုက်၏ ။
ပြဲပြဲလန်ကာ အတွင်းသား နီနီရဲရဲ ဖြင့် ပွင့်အာနေသော မထားခင်၏ စောက်ဖုတ်အား မျက်နှာအပ်၏ အကွဲကြားအတွင်းသို့ လျှာစောင်းထိုးတော့၏ ။တစထက်တစ လျှာဖြင့်လျက်သည်မှာ ကြမ်းလာ၏ ။ တချက်တချက် ပွင့်အာနေသော အခေါင်းအတွင်းသို့ လျှာဖျား ထိုးသွင်းကလိ ပေးနေ၏ ။ တခါတရံ မာကြော၍ ထောင်နေသော ရသာဖူးခေါ် စောက်စေ့လေးအား စုတ်၍ ပေးသေး၏ ။
လင်သားအပေါ် သစ္စာ ရှိလှသော မထားခင်သည် တဏှာကြီးလှသော ခေါ်တောကုလား၏ လျှာဖျားဒဏ်ကို တာရှည်ခံနိုင်စွမ်း မရှိတော့ပေ ။ သူမ၏ လျို့ဝှက်စွာ ငုတ်လျှိုးနေသော တဏှာရာဂ စိတ်များမှာ ယခုကဲ့သို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အနှိုးအဆွ ခံလိုက်ရသဖြင့် ဒီရေပမာ တရိပ်ရိပ်တက်လာပေပြီ ။ကိုထွန်းခင် အဖို့ ယခုကဲ့သို့ ခေါ်တောကုလား ပြုသကဲ့သို့ ပြုရမည်မှာ ဘယ်ကဲ့သို့မျှ မဖြစ်နိုင်ပေ ။
မိန်းမတန်ဆာခေါ်စောက်ပတ်မှာ အလွန်ညစ်ပတ် သည့်အရာဟူ၍ အများက နားလည်ထားကြ၏ ။ လက်နှင့် သေသေချာချာ ကိုင်ရမည်ကိုပင် ရွံ့ရှာကြ ၏ ။ ထို့ကြောင့်ပင် ကိုထွန်းခင်သည် မထားခင်အား ပါးနမ်းခြင်းမှ လွဲ၍ အပေါ်မှ တက်ကာ ညောင့်ခြင်းကိုသာ ပြုခဲ့၏ ။
ကြာတော့လည်း မထားခင်သည် ကုလား၏ လျှာဖျား အထိုးအဆွကို သာယာရစ်မူးလာသည် ဆိုလျှင်ပင် သူမ၏ စောက်ခေါင်းအတွင်းမှ တဏှာ ရေကြည်တို့သည် တစိမ့်စိမ့် စီးဆင်းလာပေ၏။ သူမ၏ တဏှာရေကြည် အရသာကို ခံမိသော ကုလားသည် သူမ၏ တင်ပါးဆုံအား ကုတင်စောင်းတွင် အသေအချာ တင်၍ ခြေများကိုကား၍ မကာ သူ၏ ပုခုံးပေါ်သို့ တင်လိုက်၏ ။ ထိုအနေအထားမှာ သူမ၏ ပေါင်ဂွ ဆုံတွင် ပုန်းအောင်းနေသော စောက်ဖုတ်အား အစွမ်းကုန် ပေါ်လွင်စေရုံသာမက စောက်ခေါင်းအတွင်းသား ရဲရဲကိုပင် အစွမ်းကုန် ဟပေးနေသကဲ့သို့ ဖြစ်နေစေ၏။
အနေအထားမှန်ကာ ပြဲပြဲလန်နေသော နီတာတာစောက်ဖုတ်အား အသေအချာ အားရပါးရ ကြည့်ပြီးသော် ကုလားသည် သူ၏ သံမဏိချောင်းကြီးကဲ့သို့ မတ်မတ်ထောင်ကာ တဆတ်ဆတ် ထောင်နေသော လီးကြီးကို လက်ဖြင့် အသေအချာ ဆုပ်ကိုင်ကာ အရည်ကြည်ဖြင့်စွတ်စိုကာ ထိပ်ဝလန်နေသော ဒစ်တုတ်ကြီးကို အသေအချာချိန်၍ ပြဲအာနေသော မထားခင်၏ အခေါင်းဝတွင် တေ့ပေးလိုက်၏ ။ ပူနွေးနေသော ကုလားဒစ်ကြီး၏ အထိအတွေ့ခံလိုက်ရသော မထားခင်သည် တွန့်သွား၏။
ကြာမြင့်စွာ အချိန်ဆွဲထားလျှင် မဖြစ်သဖြင့် ကုလားသည် သူမ၏ ပေါင်နှစ်လုံးကို မိမိရရ ပုခုံးပေါ်တွင် ထမ်း၍ သူမ၏ ဘေးတဘက်တချက်မှ လက်လျှိူကာ သူမ၏ ပုခုံးနှစ်ဘက်ကို အားရပါးရ ဆုပ်ကိုင်ပြီး တင်ပါးကို အားယူရင်း နောက်အနည်းငယ်ဆုတ်၍ အရှိန် ခပ်ပြင်းပြင်းဖြင့် ရှေ့သို့ ဆောင့်၍ သွင်းလိုက်သည်တွင် ..
“အမလေး … အမေရဲ့ … သေပါပြီ”
ဟူသော မထားခင်၏ အသံစူးစူးဝါးဝါးကြားမှ
“ဖောက် ဖျစ် ဖွတ် ”
ဟူသော အသံနှင့်အတူ မြင်းလီးကြီးမျှ ကြီးမားလှသော ကုလားကြီး၏ ဒစ်ပြဲကြီးမှာ သူမ၏ နီတာတာ အတွင်းသားလေးများကို ဖောက်ထွင်းကာ တချိန်က ကိုထွန်းခင်၏ သုတ်ရည်ကို ထိန်းသိမ်း၍ နှင်းဥ ဆိုသည့် ကလေးပေါက်ဖွားပေးခဲ့သည့် သားအိမ်အတွင်းသို့ ဒုတ်ဒုတ် ဝင်သွားပေပြီ။
မထားခင်သည် ကုလား၏ လီးဒဏ်အား မချိမဆန့် ခံလိုက်ရသဖြင့် သူမ၏ ပါးပြင်ပေါ်ဝယ် မျက်ရည်များ လိမ့်၍ ဆင်းလာခဲ့၏ ။ သူမစောက်ခေါင်း တလျှောက်လုံးမှာ သူ၏ လီးချောင်းကြီးဖြင့် ပြည့်ကြပ်နေသည့်အပြင် သူမ၏ ရင်ခေါင်း တစ်ခုလုံးပင် ပြည့်နေသည်ဟု ထင်ရ၏။ အသဲခိုက်အောင် နာသွားကြောင်း သိရသော ကုလားသည် ခဏတာမျှ သူ၏ ငပဲအား အတွင်းတွင် စိမ်ထား၍ တဖြည်းဖြည်း ပြန်၍ ဆွဲချွတ်လိုက်၏။ မထားခင်သည် နာကျင်ခြင်း ဝေဒနာကို သူမ၏ အခေါင်းတွင်းမှ ပြန်လည်ခံစားနေရသဖြင့်
“ဟဲ့…. မအေလိုး ကုလားရဲ့ ငါတော့သေတော့မယ်ဟဲ့…..”
ဟု အော်ဟစ် ကြိမ်ဆဲမိ၏ ။ မထားခင်အား ကြေးစား ဖာတစ်ယောက်ကဲ့သို့ အထင်ရောက်နေသည့် ကုလားသည် မိမိအား ဆဲသည်ကို ဒေါသဖြစ်လာသဖြင့် မည်သို့မှ ပြန်မပြောတော့ပဲ ကြပ်ကြပ်တီးတီး ဆုပ်ကိုင်ထားသကဲ့သို့ အထဲဝင်နေသော သူ၏လီးအား ပြန်၍ ဒစ်အရင်းထိ ဆွဲနုတ်ကာ အရှိန်ခပ်ပြင်းပြင်း ပြန်၍ ဆောင့်ထည့်လိုက်တော့၏။
“အမလေး အမေရဲ့ သေပါပြီတော့ ဟီးဟီး”
မိမိ အခေါင်းအတွင်းသို့ အရှိန်ပြင်းစွာ ဝင်ရောက်လာသော လီးကြီး၏ ဒဏ်ကို ခံလိုက်ရပြန်သဖြင့် မထားခင်သည် ငယ်သံပါအောင် အော်မိပြန်၏။ ထိုအချက်မှ အစပြု၍ ကုလားသည် သူမအား မညှာမတာ ညောင့်တော့၏ ။
ပြဲပြဲလန်နေသော သူမ၏ အတွင်းသား နီတာရဲ လေးမှာ ဒစ်ပြဲကြီး အတွင်းသို့ဝင်လျင် အတွင်းသို့ ပြွတ်သိပ်စုသွားပြီး ပြန်၍ ဆွဲထုတ်လျှင် အာပြဲကာ ဒစ်နှင့်အတူကြွ၍ ဆူဟဟ ဖြစ်လာ၏။ တစထက်တစ ကုလားသည် အဆောင့်အထိုး ကြမ်းလာသည်နှင့်အတူ မထားခင်၏ ကြိမ်းမောင်းဆဲဆိုသံများ တဖြည်းဖြည်း ပျောက်လာတော့သည်။
သူမ အံ့သြမိသည်မှာ ကိုထွန်းခင်သည် သူမအား လိုးခဲ့သမျှတွင် သူမ အပျိုစင်ဘဝဖြင့် အစပထမ ခံရသည့် ညတုန်းကသာ နာ၍ ကြည်ကြပ်တီးတီး ပြည့်ပြည့်၀၀ ခံရ၏ ။ ထို့နောက်တွင်မူ တဖြည်းဖြည်း ပြည့်ဝမှု မရှိခဲ့ ။ နှင်းဥအား မွေးဖွားပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကိုထွန်းခင်နှင့် ကာမစပ်ယှက် ရသည်မှာ သာ၍ပင် စီးစီးလုံးလုံး မရှိတော့ပေ။
အမှန်မှာ ကလေးမွေးလိုက်ရသဖြင့် အတွင်းသားများ လျော့ရဲလာသဖြင့် စောက်ခေါင်းမှာ ကျယ်လာ ၏။ သူမ၏ စောက်ခေါင်း ကျယ်လာသကဲ့သို့ ကိုထွန်းခင်၏ လီးမှာ ပိုမကြီးလာ။ ထိုကဲ့သို့ မကြီးလာရုံသာမက ကျန်းမာရေးမှာ တဘက်က ထိခိုက်လာသဖြင့် သူမအား မဆောင့်နိုင် ၊ မညှောင့်နိုင် မလိုးနိုင်သည်မှာ အတော်ကြာခဲ့ပေပြီ ။ ကိုထွန်းခင်သည် ကျန်းမာရေးကြောင့် ကာမရာဂ စိတ်များ ရုတ်လျော့ နေသော်လည်း ကျန်းမာရေး ပြည့်ဝ၍ အသက်ငယ်သေးသော မထားခင်အဘို့ လင်သား မမာမကျန်း ရှိနေစဉ် စိတ်လက်မကောင်းဖြစ်ကာ သူမ၏ တဏှာစိတ်မှာ မီးခဲပြာဖုံးသကဲ့သို့ ဖြစ်နေ၏ ။
ယခုကဲ့သို့ ခေါ်တောကုလားရဲ့ အပြုအစု အနှိုးအဆွတွင် အစွမ်းကုန် စိတ်တက်ကြွလာကာ ပြည့်ပြည့်ဝ၀ စီးစီးလုံးလုံး ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း အဆောင့်အထိုး အညှောင့်တို့ကို လီးကြီးကြီးနှင့် ခံနေရသည်မို့ သူမအဘို့ လောကကြီးကို မေ့နေပေတော့သည်။
ကုတင်စွန်းတွင် တင်ပါးထား၍ ပေါင်နှစ်လုံးကို ပုခုံးထက်တွင် လျှိုထမ်းကာ သူမရဲ့ ပုခုံးနှစ်ဘက်ကို မိမိရရ ဆုပ်ကိုင်ပြီး စက်သေနတ်ပစ်သကဲ့သို့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ညှောင့်နေသော ကုလားသည် အောက်မှခံနေသာ မထားခင်က တစတစ ကော့၍ကော့၍ ပေးလာသဖြင့်
“ဖျစ်..ဖွတ်.. .ဖတ်…ဖစ်….ဖွတ် …. ဖတ် ”
ဟူသော အသံများ ဖုံးလွှမ်းသွားသည် အထိ ခပ်သွက်သွက်ကြီး ညောင့်လိုးရင်း သူတို့နှစ်ဦးပြိုင်တူ ကာမ စည်းစိမ် အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်ကာ အရည်များ ပန်းထွက်ကုန်တော့၏။
တခဏမျှ နှစ်ဦးသာ မှိန်းနေကာ ကုလားကြီးသည် လီးချောင်းကြီးအား တဖြည်းဖြည်း ဆွဲနုတ်လိုက်သဖြင့် “ဖွတ် ” ဟူသော အသံနှင့်အတူ အရေများရွှဲကာ မဲမဲပြောင်နေသာ ငပဲကြီးမှာ တရမ်းရမ်းနှင့် ထွက်လာတော့သည် ။ မထားခင်သည် အနည်းငယ်မျှ ကုတင်ပေါ်တွင် မှီန်းနေပြီး ထမီကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဝတ်ကာ အိမ်ရှေ့ အခန်းသို့ ထွက်လာ၏။
သူမနှင့် သူ၏ ဦးလေး ကုလားကြီးတို့ နှစ်ပါး သွား နေကြပုံ အလုံးစုံကို အစအဆုံး ချောင်းကြည့်ပြီး ကုလားထိုင်ပေါ်တွင် ပြန်ထိုင်နေသော အာမက်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် တိုးနေသဖြင့် မထားခင် မျက်နှာပူမိ၏ ။
“ရော့… အစ်မကြီး ကျတော့် ကတိအတိုင်း အစ်မကြီးကို ကူညီတာ”
အာမက်ပေးသော ငွေအထပ်အား မထားခင်သည် လှမ်းယူရင်း ရေတွက်ကြည့်ရာ ငွေသုံးဆယ် ဖြစ်နေသဖြင့် ကိုထွန်းခင်ကို ပြုစုရန် လုံလောက်သဖြင့် ဝမ်းသာမိ၏ ။ ငွေရရှိသဖြင့် သူမသည် အာမက်အား နှုတ်ဆက်ကာ အိမ်သို့ ပြန်လာခဲ့တော့ ၏။
အာမက်၏ ဦးလေးအား ပျော်တော်ဆက်၍ ရခဲ့သော ငွေသုံးဆယ်မှာ တစ်လပင် မသုံးလိုက်ရပေ ။ ကိုထွန်းခင် ရောဂါမှာ တီဘီခေါ် အဆုတ်နာ ရောဂါဖြစ်သဖြင့် လုံးဝပျောက်ကင်းမသွား ၊ သက်သာရုံမျှသာ ဖြစ်၏ ။ မထားခင်တို့၏ အိမ်ထောင်တွင် ဦးစီးအားကိုးရာ ကိုထွန်းခင်သာ ဖြစ်၏ ။ ယခုကဲ့သို့ ကိုထွန်းခင်တစ်ယောက် ဘုန်းဘုန်းလဲသည့် အချိန်တွင် အားကိုးရာမဲ့ ဖြစ်လာ၏ ။ ပို၍ ကံဆိုးခြင်းကတော့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးပျက်ကပ်နှင့် ရေနံမြေသပိတ် အမှောင့်ပရောဂသည် ဝိုင်းကူ၍ နှိပ်စက်နေကြပေ ၏။
လက်ကျန် စာရင်းပိတ် အဖြစ် သုံးမူးသော ငွေကို လက်တွင်ဆုပ်ကာ ငိုင်နေသော မထားခင် ယနေ့ စားရန်ကို ထိုငွေသုံးမူးဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်သော်လည်း မနက်ဖြန် စားရန် အဘယ်သို့ ကြံဖန်ရမည်နည်း။ အစရှိနောက်နောင် ဆိုသကဲ့သို့ အာမက်တို့ထံ သွားရန်မှာလည်း တစထက်တစ မိမိဘဝကို နစ်မွန်းစေ မည့် အလုပ်ဖြစ်၏ ။ “ပုတ်လျှင်ပေါ် ဟုတ်လျှင်ကျော်” ဆိုသကဲ့သို့ မိမိ၏ လျို့ဝှက်ထားသော ကိစ္စသာ တစ်နေ့ ဗူးပေါ်သလို ပေါ်ခဲ့ပါက မိမိတစ်ယောက်သာမဟုတ် သမီးပျို နှင်းဥလေး၏ ဘဝကိုနစ်နာပေတော့မည် ။ သို့ပါသော်လည်း တဘက် က ဝမ်းရေးနှင့် လင်သည်၏ ကျန်းမာရေး ၊ ခက်သည် အခုမှ အလွန်ပင်ခက်၏။
မထားခင်သည် မိမိကိုယ်မိမိ သတ်၍သာ သေလိုက်ချင်၏ ။ မိမိကိုယ်မိမိ သတ်သေရန်ပင် အသေမဖြောင့် ၊ တနုံနုံ စဉ်းစားရင်း တစ်နေ့သာ ကုန်ဆုံးပြန်၏ ။ နောက်တစ်နေ့ နံနက်တွင် လက်ထဲတွင် ကြေးနီပြား တစ်ပြားတစ်ချပ်မျှပင် မကျန်တော့သည်ကို ရင်ဆိုင်နေရသော မထားခင်မှာ ရူးမတက်ဖြစ်နေ၏ ။
“မေမေ ဆန်ကုန်နေတယ် နှင်းဥ သွားဝယ်ရမလားဟင်….”
ဘာမျှမသိရှာသော သမီးလေး လာမပြောခင် မထားခင်မှာ တစ်ခုခု လုပ်ရကိုင်ရမည်ကို ဆုံးဖြတ်ရပေတော့မည် ။ မတက်သာသည့်အဆုံး မထားခင်သည် အာမက်အား အသနားခံကာ ငွေတိုးနှင့် ချေးမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး အိမ်မှ ထွက်လာခဲ့၏ ။ လမ်းတလျှောက်လုံး အရင်တစ်ခါက အာမက်၏ ဦးလေး မိမိအား ပယ်ပယ်နယ်နယ် လိုးညှောင့်ခဲ့ပုံကို စဉ်းစားရင်း တုန်လှုပ်မိ၏ ။ ယခုအခါတော့ ထိုကဲ့သို့ အနစ်မွန်းမခံ ၊ ငွေကိုသာ အတိုးနှင့် ချေးမည်ဟု ထပ်တလဲလဲ ဆုံးဖြတ်မိ၏။
အိမ်ကြီးရှေ့တွင် ရပ်လိုက်သည်နှင့် အာမက်၏ ပြုံးဖြီးနေသော မျက်နှာကို မြင်လိုက်ရ၏ ။ အာမက်သည် မထားခင်အား ပြာပြာသလဲ ဧည့်ခန်းတွင် အထိုင်ခိုင်းရင်း
ဟု စတင်မေးလေသည် ။
“အာမက်ရယ် ငါ့ကို ငွေနည်းနည်း လှည့်စမ်းပါဦး ဟယ် ”
“သြော် အစ်မကြီး ငွေလိုနေလို့လား ခက်တာက ကျတော့် ဦးလေး ရန်ကုန်မှာ ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ သွားတယ်”
မထားခင်အဖို့ ကုလားကြီး မရှိကြောင်း ကြားသိလိုက်ရသဖြင့် ဝမ်းသာသွားမိသည် ။
“အာမက်ရယ် ငါ့ကို ငွေတိုးနဲ့ ချေးပါဟယ်”
“ငွေတိုးနဲ့ဟုတ်လား အစ်မ ငွေတိုးနဲ့ ချေးဖို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူး၊ ငွေတိုးချတယ်ဆိုတာ ယုံကြည်လောက်မှ ပေးတာ ။ အခုအစ်မကို ပေးတယ်ထား၊ အစ်မငွေပြန်ဆပ်မှာက အစ်ကိုအလုပ်လုပ်နိုင်မှ၊ အစ်ကိုက ဘယ်တော့ ကျန်းမာပြီး ဘယ်တော့ အလုပ်လုပ်နိုင်မလဲ ၊ ဘာမှ အာမခံချက်မရှိဘူး ၊ ဒီတော့ ဒီလိုလုပ်လေ ၊ အရင်ဦးလေးနဲ့ အစ်မ အလုပ်လုပ်ကြသလို အခုကျတော်နဲ့ အလုပ်လုပ်ကြရအောင်”
အာမက်သည် မြန်မာစကား အပြောအဆိုတွင် လည်ပတ်လှသည် ။ ပါးနပ်သည်။ မထားခင်မှာ ငိုင်ရပြန်ပေသည် ။
“ဘာများ ဒီလောက် စဉ်းစားနေရသလဲ အစ်မကြီးရဲ့ အကြောင်းက သိပ်မထူးပါဘူး ၊ လာပါအစ်မရဲ့ ကျတော်က ဦးလေးထက် သာရပါစေမယ်.. ဟဲ.. ဟဲ .. ဟဲ”
ဟု ပြုံးဖြီးဖြီးပြောရင်း မထားခင်အား အတွင်းခန်းသို့ ဆွဲခေါ်ခဲ့တော့၏ ။ မထားခင်သည် ဆုပ်ကန်ဆုပ်ကန်ဖြင့်သာ ကုတင်ပေါ်သို့ ရောက်ခဲ့ရပြန်ပါသည် ။
အာမက်သည် မထားခင်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်၍ ကုတင်ထက်တွင်ထိုင်၍ မထားခင်အား ပွေ့ဖက်ကာ သူ၏ နှုတ်ခမ်းမဲကြီးဖြင့် မထားခင်၏ နှုတ်ခမ်းအား အင်္ဂလိပ်မင်းသားစတိုင် ခပ်ကြမ်းကြမ်း စုပ်ပစ်လိုက်၏ ။ နမ်းရုံသာ အနမ်းခံခဲ့ဘူး၍ နှုတ်ခမ်းအစုပ်မခံဘူးသော မထားခင်မှာ တစ်မျိုးအတွေ့ထူးရပြန်၏။
နှုတ်ခမ်းခြင်း စုပ်နေစဉ် အာမက်သည် သူမ၏ အင်္ကျီကြယ်သီးများကို မသိမသာ တစ်လုံးချင်း ဖြုတ်ပြီး ဘော်လီဂျိတ်ကိုပါ ဖြုတ်ပစ်လိုက်သောအခါ ဝင်းဝါ၍ ပြည့်ဖြိုးသော ရင်သားတွဲတွဲကြီးမှာ ပေါ်ထွက်လာ၏ ။ အင်္ကျီနှင့်ဘော်လီ မရှိတော့သဖြင့် အပေါ်ပိုင်း ဗလာဖြစ်နေသော မထားခင်အား ကုတင်ပေါ်တွန်းလှဲလိုက်ကာ ဆပ်ကနဲ ထမီကို ဆွဲချွတ်လိုက်ပြန်သဖြင့် မထားခင်မှာ မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားရပေသည်။
မထားခင်မှာ ရှက်လှသဖြင့် မျက်နှာကို လက်ဝါးဖြင့် အုပ်ထား၏ ။ သားကောင်အား မစားမသောက်ခင် ဖမ်းကစားသော ကျားကဲ့သို့ အာမက်သည် မထားခင်၏ နို့နှစ်လုံးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆုပ်ချေ၏ ။ ပါးစပ်ဖြင့် နို့သီးခေါင်းမဲမဲကြီးကို စုပ်ပေး၏ ။
“အို… ယားတယ်… အာမက်ရယ်”
မထားခင်က အာမက်၏ မျက်နှာအား တွန်းပစ်လိုက်၏ ။ အာမက်က အခြားတဖက်မှ နှိုးဆွပြန်၏ ။ အမွှေးအမျှင်များဖြင့် ဖုံးအုပ်ကာ ကြွကြွရွရွ ကြီး ဖောင်းကြွနေသော မထားခင်ရဲ့ မုန့်ပေါင်းသဏ္ဏာန် စောက်ဖုတ်လေးအား လက်ဖဝါးနှင့် ခပ်ကြွကြွလေး ပွတ်ပေးလိုက်ကာ အကွဲကြောင်းထိပ်မှ ပြူးထွက်နေသည့် စောက်စေ့ နီနီရဲရဲလေးအား လက်ကြားတွင် ညှပ်၍ ပွတ်ပေးလိုက်၏ ။ ထိုမှတဆင့်တက်၍ အကွဲကြောင်းလေးထဲသို့ လက်ညှိုးနှစ်ချောင်းထိုးကာ စောက်ခေါင်းအတွင်းသားများကို မွှေပေးလိုက်သည်။
“အာမက် နင်ဘယ်လိုများ လုပ်နေတာလဲဟယ်”
ဟု မထားခင်က ဟန့်တားလိုက်သည် ။
လက်ညှိုးနှင့် စောက်ခေါင်းတွင်း ထိုး၍ကလိပေးနေသော အာမက်သည် သူ၏ လက်ညှိုးတွင် မထားခင်၏ ရှေ့ပြေး တဏှာရေကြည်များ စိုစိုစွတ်စွတ် တွေ့ထိမိသောအခါ ကုတင်ပေါ်သို့တက်၍ မထားခင်အား ဆွဲထူလိုက်၏ ။
“မရှက်ပါနဲ့ အစ်မရယ် ဖယ်စမ်းပါ ဒီလက်ကြီးက”
ဟု ပြော၍ မျက်နှာပေါ်တွင် ဖုံးအုပ်ထားသော မထားခင်၏ လက်များကို ဖယ်ချလိုက်၏ ။
“ဒါက ဘယ်လိုလုပ်ဦးမှာလဲ အာမက်ရယ်”
မထားခင်သည် အာမက်နှင့်ယှဉ်၍ ကြမ်းပေါ်တွင် ရပ်နေ၏ ။ အာမက်သည် သူ၏ အဝတ်များကို တစ်ထည်ချင်း ချွတ်၍ ချလိုက်သည်တွင် နောက်ဆုံး အမွှေးများပြောင်အောင် ရိတ်ထားသဖြင့် ဘွားဘွားကြီးပေါ်လွင်ကာ တဆပ်ဆပ် တောင်နေသော မြင်းလီးသမျှ ကြီး၍ ထိပ်လန်နေသည့် လီးချောင်းကြီး ပေါ်ထွက်လာ၏ ။
“ကဲ…. အစ်မကြီး မရှက်ပါနဲ့တော့ဗျာ ကျတော်အစ်မကြီး အဖုတ်က အမွှေးတွေ ရိပ်ပေးမယ် ဒီကုလား ထိုင်ပေါ်တက်ပြီး ဆောင့်ဆောင့်ထိုင်”
ဟု ခိုင်းသဖြင့် မထားခင်သည် ရှက်သဖြင့်
ရုန်းရင်းကန်ရင်း ကုလားထိုင်ပေါ် ဆောင့်ဆောင့်ထိုင်ရသည့် အခြေအနေ ရောက်ရပေသည်။ အာမက်သည် သူမ၏ အရှေ့တည့်တည့်တွင် ထိုင်၍ မုတ်ဆိပ်ရိပ်ဓားဖြင့် အသေအချာ ရိပ်ပေးလိုက်သည်တွင် တခဏခြင်း ပြောင်တလင်းခါသွား၏ ။ အမွှေးအမျှင်များ ဗလာကျင်းသွားသဖြင့် သူ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ဝင်းနေ၍ အကွဲကြောင်းအတွင်းမှ အသားနုလေးနှင့် အစေ့မှာ ရဲရဲနီနေ၏။
အာမက်သည် ရေဇလုံထဲမှ ရေနှင့် သူမ၏ စောက်ဖုတ် တစ်ခုလုံး အတွင်းအပြင်ကို သေသေချာချာ ဆေးကြော သုတ်သင်ပေးလိုက်ပြီး သူမအား ကုတင်ပေါ်တွင် ပက်လက် အိပ်စေ၏။ ထို့နောက် အာမက်သည် ကုတင်ပေါ်သို့ တက်ကာ မထားခင်နှင့် ခြေပြန် ခေါင်းပြန် လှဲချလိုက်ကာ…..
“ကဲ အစ်မ ဘာမှရွံ့စရာ မရှိဘူး ၊ အစ်မရဲ့ အဖုတ် ကို ကျတော်က ပါးစပ်နဲ့ လျက်သလို ကျတော့်လီးကိုလည်း စုပ်ပေးပါ ၊ ကျတော် အစ်မကို ငွေတစ်ရာပေးမယ်”
မထားခင်မှာ အာမက်၏ လီးချောင်းကြီးကို
မိမိပါးစပ်ဖြင့် စုပ်ရမည်ကို ရွံ့ရှာမိ၏ ။ သို့ပါသော်လည်း သူမ ရှောင်ဖယ်ငြင်းဆန်ရန် မပြုခင်ပင် အာမက်သည် သူ၏ နှုတ်ခမ်းဝသို့ ပြဲလန်နေသည့် ဒစ်ကြီးအား တေ့ပြီးသား ဖြစ်နေ၏ ။
“စုပ်ပါဗျာ အစ်မရာ ငွေတစ်ရာဆိုတာ နည်းလို့လား ကဲနောက်ထပ် တစ်ဆယ် တိုးပေးပါ့မယ် ဟစမ်းဗျာ ခင်ဗျား ပါးစပ်ကို”
ဟု ပြောပြောဆိုဆို အာမက်သည် မထားခင်၏ ပါးစပ်အား အတင်းဟခိုင်း၍ သူ၏ ဒစ်ကြီးကို ထိုးထည့်လိုက်၏ ။
မထူးတော့ပြီဟု သဘောထားမိသော မထားခင် သည် တဝက်မျှ မိမိပါးစပ်ထဲသို့ တိုးဝင်လာသော အာမက်၏ လိင်ချောင်းကို မသိမသာ တစစစမ်းကြည့်လိုက်မိ၏ ။ အာမက်သည် ကျေနပ်သွားကာ
မထားခင်၏ ခြေရင်းဘက်သို့ ခေါင်းပြန်လှဲ့ကာ သူမ၏ ပေါင်နှစ်လုံးကို ခပ်ကားကား ထားလိုက်ပြီး ဟပြဲသွားသော နီတာတာ စောက်ခေါင်းအတွင်းသို့ လျှာဖျား ထိုးထည့်လိုက်၏ ။
အာမက်သည် မထားခင်၏ အမွှေးအမျှင် ကင်းစင်ကာ ပြောင်ချောနေသော စောက်ခုံတပြင်လုံးကို လျှာဖြင့်လျက်ခြင်း၊ ဟပြဲပြဲ ဖြစ်နေသော အခေါင်းတွင်းသို့ လျှာထိုးကာ ကလိခြင်း၊ အကွဲကြောင်းထိပ်ရှိ ရသာဖူးခေါ် ကာမစက်ခလုတ်အား နှုတ်ခမ်းကြားတွင်ထား၍ စုပ်ယူခြင်းဖြင့် အစွမ်းကုန် ကြဲလိုက်သဖြင့် မထားခင်မှာ ထိုးထိုးထွန့်ထွန့် ဖြစ်နေပြီး သူ၏ ပါးစပ်ထဲမှ သံမဏီချောင်းကဲ့သို့ မာကြော၍ ကြီးထွားလှသော အာမက်၏ လီးချောင်းကြီးအား တပြွတ်ပြွတ်နှင့် စုပ်နေ၏ ။
မကြာလှပါ အာမက် လျှာဖြင့် ထိုးဆွနေသော မထားခင်၏ စောက်ခေါင်းတွင်းမှ အရည်များ ပွက်၍ ပွက်၍ ထွက်လာသည်ကို အာမက်က စုပ်၍ စုပ်၍ ယူလိုက်သလို မထားခင်၏ ပါးစပ်တွင် ပြည့်ကြပ်နေသည့် အာမက်၏ ဒစ်ပြဲကြီးမှ ပန်း၍ ပန်း၍ ထွက်လာသော သုတ်ရည်များကို မထားခင်သည် မျိုချလိုက်၏။
ထို့နောက် သူတို့နှစ်ဦးသည် ကုတင်ပေါ်တွင် ထိုင်၍ အမောဖြေနေ၏ ။
“အာမက် မင်းပြီးရင် အစ်မပြန်မယ်”
မထားခင်သည် ပြန်ရန် ဟန်ပြင်၏ ။ အာမက်က လှမ်းဆွဲ၍ သူ၏ ရင်ခွင်တွင်းတွင် မထားခင်အား ထား၍
“ဘယ်ကလာ ပြီးရဦးမှာလဲ အစ်မရယ် ၊ အခုမှ အလုပ်လုပ်မလို့”
ဟု ပြောပြောဆိုဆို မထားခင်အား ကုတင်ဖြတ်၍ အိပ်စေကာ သူမ၏ တင်ပါးကို ကုတင်စွန်းတွင် သေသေချာချာ တင်လိုက်၏ ။ ကုတင်အောက်တွင် တွဲလောင်းကျနေသော သူမ၏ ခြေထောက်များကို အာမက်သည် ပုခုံးပေါ်သို့ လှမ်းတင်လိုက်ရင်း တစထက်တစ ပြန်တောင်လာသော ငပဲကြီးကို ပွင့်အာနေသော အခေါင်းပေါက်ဝတွင် တေ့လိုက်၏။
သူသည် သူ၏ တုတ်ခိုင်ကြီးမားကာ ပြဲလန်နေသော ဒစ်ကြီးကို ပွင့်အာကာ ရဲရဲနီနေသော မထားခင်၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ ချက်ခြင်း မထိုးသွင်းပေ ။ ပြဲပြဲလန်နေသော အပေါက်ဝ၏ အပေါ်တွင် မတ်မတ်ထောင်နေသော နီတာတာ ရသာဖူးခေါ် စောက်စေ့လေးကို သူ၏ ဒစ်ပြဲကြီးဖြင့် ပွတ်၍ ပွတ်၍ ပေးလိုက်သည်တွင် မထားခင်သည်
ဟူ၍ ညီးတွားရင်း သူမ၏ တင်ပါးကြီးများကို ကော့၍ ကော့၍ ပေးလာ၏ ။ သို့တိုင်အောင် အာမက်သည် သူ၏ လီးကြီးအတွင်းသို့ မထည့်သေးဘဲ ပွင့်အာနေသော နီတာတာ အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားများကို သူ၏ ဒစ်လုံးကြီးဖြင့် မွှေပေးလိုက်၏ ။
“အာမက်… အာမက်.. မင်း…မင်း.. ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲဟင်… မင်း.. အို… ငါ့ အသဲနှလုံးတွေ ဘလောင်ဆန်နေပြီ… ဟင်း… ဟင်း…”
မထားခင်၏ ညုသံ ပေါ်ထွက်လာသည့်တိုင် အာမက်သည် မလိုးသွင်းသေးပေ။ ပွင့်အာနေသော အခေါင်းပေါက်ဝတွင်သာ သူ၏ ဒစ်ကြီးနှင့် မွှေနှောက်ပေးနေ၏ ။ တချက်တချက် သူ၏ ဒစ်လံကြီးကို ရမက်စိတ်ဖြင့် အစွမ်းကုန် ထနေသော နီရဲရဲ အစေ့ကလေးအား ထိတချက် မထိတချက် ကလိပေးလိုက်သည်။
“အာမက်ရယ် … မင်းငါ့ကို ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ…. မင်းရဲ့ … မင်းရဲ့ လီးကြီးကို… ထိုးထည့်လိုက်ပါတော့လား…. ဟင်း..ဟင်း”
တဟင်းဟင်းဖြင့် အဖျားတက်သကဲ့သို့ တဏှာရှိန်တက်နေသော မထားခင်၏ ပေါင်များကို ခပ်ကားကားမ၍ ပခုံးပေါ်ထမ်းကာ သူမ၏ ပခုံးကို အားရပါးရဆွဲပြီး ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်လိုးလိုက်သော အာမက်၏ ကြီးမားလှသော လီးကြီးသည် ပြဲအာနေသော မထားခင်၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့
ဟူသော အသံစုံနှင့် ဝင်သွားသလို
“အမလေး… အမေရဲ့ ”
ဟု မထားခင် အော်လိုက်မိသည်။
“ဘာဖြစ်သွားလဲ … အစ်မ… ဟင်”
အာမက်က လန့်ဖြန့်ကာ မေးလိုက်၏ ။
“ရက်စက်ပါ့ အာမက်ရယ် မင်းရဲ့ မြင်းလောက်ကြီးတဲ့ လီးကြီးနဲ့ ဒီလို တအားဆောင့်လိုက်တော့ ငါ့သားအိမ် ကွဲသွားမှာပေါ့”
အာမက်သည် မထားခင် အနာသက်သာစေရန် ခဏမျှ သူ၏ လီးချောင်းကြီးကို သူမ၏ စောက်ခေါင်းထဲတွင် ထည့်ထားပြီး တဖြည်းဖြည်း ပြန်ဆွဲနှုတ်လိုက်၏ ။ သုံးပုံ နှစ်ပုံ ခန့်ဆွဲနှုတ်ပြီး ခပ်ဖြည်းဖြည်း ပြန်သွင်းလိုက်ပြန်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဆယ်ချက်ခန့် သွင်းလိုက် ထုတ်လိုက် လုပ်ပေးသော အခါ သူမ၏ စောက်ခေါင်းအတွင်းမှ စီးလာသော ကာမရှေ့ပြေးအရေကြည်တို့ကြောင့် “ရှော” ကနဲ “ရှော” ကနဲဝင်သွား၏ ။
သွက်လာသည်နှင့် အမျှ “စွပ်..ဖွတ် …ဖတ် .စွတ် … ဖွတ်…ဖတ် ” ဟူသော အခေါင်းအတွင်းသို့ လီးချောင်းဝင်သံမှာ အခန်းတွင်းဝယ် အချက်ကျကျ ပေါ်ထွက်လာ၏ ။
မထားခင်၏ စိတ်တွင် အာမက်၏ ဦးလေးသည် ငပဲကြီးရာတွင် အာမက်လောက်ပင် ကြီးသော်လည်း အဆောင့်အညှောင့် အလိုးတွင်မူ အာမက်လောက် ဆောင့်အား ညှောင့်အား မသွက်လှဟု မှတ်ချက်ချမိ၏ ။ သူမ၏ စောက်ခေါင်း တလျှောက် သားအိမ်ဝတိုင် ပြည့်ကြပ်စွာ သွတ်သွင်းထားသော အာမက်၏ လီးချောင်းကြီးသည် ခပ်သွက်သွက် ဝင်ထွက်နေရာ သူမ၏ အတွင်းသားနုနုလေးကို ပွတ်တိုက်နေသဖြင့် မထားခင်သည် “အင်း… အင်း…” နှင့် ညီးညူစပြုလာပြန်၏။
အာမက်သည် ဆယ့်ငါးချက်ခန့် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်ပေးလိုက်ကာ အရှိန်အနည်းငယ် လျှော့၍ တချက်ခြင်း ဆောင့်ပေးလိုက်ပြန်သည်။ ထိုကဲ့သို့ အရှိန်လျော့သွားချိန်တွင် မထားခင်က အောက်က စကောဝိုင်း၍ တမျိုး ၊ သူမ၏ တင်ပါးကြီးများကို မြောက်၍တဖုံ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်မှုကို တောင်းတပြန်တော့လည်း အာမက်သည် မညှာမတာပင် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခပ်သွက်သွက် ဆောင့်ပေးလိုက်တော့……..
“အင့်……ဖွတ်….. ဖတ်……. ဖွတ်……. ဖတ်….. အင့်”
ဟူ၍ တစ်ခန်းလုံး မြည်ဟီးလာ၏ ။
မထားခင်အဖို့ ကိုထွန်းခင်အား သစ္စာဖောက်ရခြင်း အတွက် ဝမ်းနည်းကြေကွဲရ၏ ။ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ စီးပွားရေးကြောင့် ဖြစ်၏ ။ ငတ်ပြတ်မှု ဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်၏ ။ ကိုထွန်းခင်၏ အသက်တစ်ချောင်း ကယ်လိုခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
မထားခင်သည် သူမရဲ့ လင်ကို ချစ်သည် ။ ထို့ကြောင့်လည်း ကိုထွန်းခင်မှလွဲ၍ မည်သူ့ကိုမှ စိတ်နှင့်ပင် မပြစ်မှားခဲ့ ။ ကိုထွန်းခင်က သူမအား ကာမရာဂ စပ်ယှက်ရာတွင် အနှိုးအဆွ မကျွမ်းကျင်သော်လည်း ချစ်လင်ဖြစ်သည်က တကြောင်း၊ အပျိုရည် တက်ကြွချိန် ဖြစ်သည်ကတကြောင်းကြောင့် ကိုထွန်းခင် တက်ညှောင့်တိုင်း ပြီးသည်က အမှန်ပင် ၊ ကာမစိတ် အထွတ်အထိပ်ရောက်ကာ သုတ်ရည် ပန်းထွက်လာသည်နှင့် ပြီးစီးသည် ဟု သူမ ထင်မှတ်ခဲ့သည်။
ကိုထွန်းခင်နှင့် ပေါင်းလာသည့် နေ့မှစ၍ ယနေ့တိုင် ညတိုင်း မီးခွက်မှုတ်လိုက်ကာ ခြင်ထောင်ထဲသို့ လင်မယား ဝင်ခဲ့ကြသည်။ ခြင်ထောင်ထဲရောက်လျှင် ကိုထွန်းခင်က သူမအား ပွေ့ဖက်၍ နမ်းသည်။ ပြီးတော့ ပေါင်ကားခိုင်းကာ တက်၍ ညှောင့်လိုးတော့သည် ။ ကြာကြာညှောင့်တော့ သူတို့နှစ်ဦးလုံး၏ သုတ်ရည်များမှာ ထွက်၍ ကိစ္စပြီးစီးပြီဟု ကျေနပ်ခဲ့ကြသည်။
အမှန်အားဖြင့် အမှောင်တွင်းမှ ကာမစစ်ပွဲသည် ဂွင်းတိုက် လက်ညိုးထိုး၍ ကာမ အာသီသ ဖြေဖျောက် ခြင်းနှင့် မည်သို့မျှ မခြားကြောင်း သူတို့မသိခဲ့ပေ ။ မိဘမောင်ဘွားတို့ကြောင့် ဆိုပါက လင်နှင့်မယား အိပ်ရန် သီးသန့်ခန်း ရှိသင့်၏ ။ အကယ်၍ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရှက်ကြောက်ခြင်းကြောင့် မီးခွက်မှုတ်သည် ဆိုပါက ထိုမျှ ရှက်ကြောက်နေလျှင် လင်မယူ သားမယူပဲ ဘုန်းကြီး မယ်သီလရှင်သာ ဝတ်ကြရန် တိုက်တွန်းချင်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမှောင်နှင့်မဲမဲတွင် ကိုယ့်ချစ်သူ၏ မျက်နှာကိုမျှ မမြင်ရဘဲ အရမ်းချစ်၊ အကန်းချစ်သာ မှန်းဆ၍ ချစ်ရ၏။ စာကြောင်း စပ်မိ၍ စာရေးသူ ကြားဘူးသော တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှာ….
ယခင်မြန်မာပြည်တွင် အင်္ဂလိပ်များ အုပ်စိုးစဉ်က ရန်ကုန်မြို့ အလယ်ပိုင်းတွင် ဖာများ အလွန်ပေါ၏ ။ အမျိုးမျိုးရှိသည့်အနက် အလွန်ရယ်ဖွယ်ကောင်းသော ကြေးနည်း အတန်းအစား တစ်ခုမှာ…. “မီးခွက် ထွန်းလျှင် တစ်ကျပ်…. မီးခွက် မထွန်း ငါးမူး ” ဆိုသည့် အတန်းအစား ပင်ရှိ၏ ။
မီးခွက်မှုတ်ထားသဖြင့် အမှောင်ထဲတွင် မိမိငပဲသည် အဘယ်အပေါက်ထဲ ဝင်သည်ကိုမျှ မသိရပေ။
ထို့ကြောင့် အလင်းရောင်သည် ကာမရာဂ စပ်ယှက်ရာတွင် လိုအပ်၏ ။ မိမိချစ်သူ၏ မျက်နှာအား တစိမ့်စိမ့် ကြည့်ရသည်မှာ အရသာ တမျိုးပင် ။
ထို့ပြင် ချစ်သူ၏ ရင်သားမို့မို့ ၊ ဆီးခုံမို့မို့နှင့် အတွင်းသား နီတာတာလေးတို့ကို မြင်တွေ့ရသဖြင့် ကာမစိတ် အဟုတ်သည် ပြည့်ဝစေ၏ ။ ပါးမို့မို့ဖောင်းဖောင်းမှ ထုံသင်းသော သနပ်ခါးနှင့် ပေါင်ဒါ သင်းသင်း ရနံ့လေးတို့သည်လည်း စစ်ကူဖြည့်ပေး၏။
နူးညံ့သော ရင်သားအစုံ ၊ ပေါင်ရင်းရှိ ဖောင်းမို့မို့ မုန့်ပေါင်း အတွင်းရှိ အသားနုနှင့် အသားတက် အစေ့လေးတို့၏ နူးညံ့သော အထိအတွေ့….
“မောင်…. မောင် …ခင်ရဲ့ အသက်မောင်ရယ် … ဟင်း ဟင်း…” ဟူသော ကြူသံလေးများနှင့် “ဖျစ်..ဖျစ်… ဖွတ်…ဖွတ်…ဖတ်. .ဖတ်” ဟူသော ကာမ ရာဂ စက်ယှက်ရာတွင် စီးဝါးလိုက်သံလေးများမှာ နားသောကဆင်စရာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်၏။
ထို့ကြောင့် ကာမရာဂ စက်ယှက်ရာတွင် ရှက်ခြင်း ကြောက်ခြင်း မရှိရန် အထူးလိုအပ်၏ ။ လင်နှင့်မယား ကာမစပ်ယှက်ရာတွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရှက်ကြောက်ခြင်း မိမိတို့ ကာမစပ်ယှက်သည်ကို
တခြားသူများ သိရှိကြမည်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့သည် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေ၍ ပြည့်ပြည့် ၀၀ ကာမစည်းစိမ် မခံစားရပေ ။ ထို့ကြောင့် ကာမစည်းစိမ် အပြည့်အဝ ခံစားလိုပါက လုံလောက်သော အလင်းရောင် ရှက်ကြောက်ခြင်း မရှိမှုတို့ကို အလွန်လိုအပ်၏ ။
အာမက်သည် မထားခင်အား မညှာမတာ တစထက်တစ ကြမ်းကြမ်းလာခဲ့ရာ မထားခင်မှာ အောက်မှ ကော့၍ ကော့၍ တမျိုး ၊ စကောဝိုင်းတိုက်၍တဖုံ အောက်ပေး ကောင်းကောင်းဖြင့် ကြုံး၍ ခံရင်း
“အင်း…အင်း …ကျွတ် ….ကျွတ်”
ဟူ၍ ညဉ်းတွားနေ၏ ။
“အစ်မကြီး …အစ်မကြီး… ဘာဖြစ်နေတာလဲဟင်..”
ဟု အာမက်သည် ဆောင့်နေရာမှ ရပ်နားရင်း မေးလိုက်၏ ။
ဟု မထားခင် တဏှာသံပါပါဖြင့် ပြောလိုက်ရာ အာမက်သည် အစွမ်းကုန် ဆောင့်၍ ဆောင့်၍ ပေးလိုက်သည်တွင် “အင်” ဟူ၍ သူမ၏
ပါးစပ်မှ ထွက်သွားသလို “စွပ်” ဟူ၍ အာမက်၏ လီးချောင်းကြီးမှ ပြဲပြဲလန်နေသော သူမ၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ ဝင်သွားသကဲ့သို့ “ဖွတ် ” ဟူသော အသံနှင့်အတူ အာမက်၏ လီးတန်ကြီးမှာ
စစ်ပွဲတွင် စက်သေနတ် သမားက ရန်သူတပ်တွင်းသို့အဆက်မပြတ် ပစ်သွင်းသကဲ့သို့ အာမက်၏ ကြီးမားလှသော သံမဏိ လီးချောင်းကြီးမှာ ပြဲပြဲလန်၍ ပွင့်အာနေသော မထားခင်၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ ပစ်၍ ပစ်၍ လိုးသွင်းလိုက်သည်မှာ သူမ၏ သားအိမ်သို့ ဒုတ်ဒုတ် ထိဝင်၍ သွားရကာ မထားခင်သည် “အင့်… အင့် ..”ဟူသော ညဉ်းသံဖြင့် တစ်ချီ ပြီးသွား၏ ။
အာမက်မှာ ဒုတိယတစ်ချီ တက်သုတ်ရိုက်နေရသဖြင့် မထားခင်နှင့်အတူ မပြီးခဲ့ပေ။ ဖြေးဖြေး တစ်ခါ ကြမ်းကြမ်းတစ်လှည့် အမျိုးမျိုး ချဲ့၍ ချဲ့၍ လိုးပါသော်လည်း မပြီးနိုင်သေးပေ ။
“အာမက် … မပြီးသေးဘူးလား.. ငါညောင်းလှပြီကွာ…”
မထားခင်က ညောင်းသည်ဟု ညဉ်းညူသဖြင့် အာမက်သည် ရပ်နားလိုက်ကာ
“ကဲ အစ်မညောင်းရင် ကျတော် ပြသလိုလုပ်”
ဟုပြောကာ သူမအား ကုတင်တွင်ဖြတ်၍ မှောက်စေ၍ ကုတင်အောက်ကြမ်းပေါ်တွင်ခြေထောက်နှစ်ဘက်ကို ကား၍ ရပ်စေ၏ ။ ထိုအနေအထားမှာ ဖြူဖွေးသော သူမ၏ ဖင်တုံးကြီးကြားမှ ပြူးအာထွက်နေသော စောက်ပတ်မှာ အာမက်အား တမျိုးစိတ်တက်ကြွစေ၏ ။
စောက်ဖုတ်ဝတွင် သူ၏ ဒစ်ပြဲကြီးအား တေ့လိုက်ကာ တွဲလောင်းကျနေသော နို့နှစ်လုံးကို အားပါးတရဆွဲ၍ ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်သွင်းလိုက်သည်တွင်
ဟူသော အသံနှင့်အတူ အာမက်၏ လီးချောင်းကြီးမှာ သူမ၏ သားအိမ်သို့ ဒုတ်ဒုတ် ဝင်သွားသဖြင့်
“အမလေး … .အာမက်…နာတယ် ”
ဟု ညဉ်းတွားမိ၏ ။
အာမက်သည် ခနမျှ နားလိုက်ပြီး ခပ်ဖြေးဖြေးချင်း ဆောင့်၍ ဆောင့်၍ ပေး၏ ။ မထားခင် ခံနိုင်ရည်ရှိလာသော အခါ သူသည် ခပ်ပြင်းပြင်းလေးဆောင့်ပေးလိုက်သည်တွင် …….
ဟူ၍ စောက်ခေါင်းလှိုဏ်သံမှာ အခန်းတစ်ခုလုံးမြည်ဟီးနေတော့၏ ။ တစထက်တစ အဆောင့် အလိုး အညှောင့်ကြမ်းသကဲ့သို့ မထားခင်မှာ ပြန်လည် စိတ်တက်ကြွလာရကာ သူမ၏ ဖင်တုံးဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီးများက မြှောက်ကာ မြှောက်ကာ အဆောင့် …. အညှောင့်…အလိုး သွက်လက်လာကြပြီး မကြာမှီ အချိန်အတွင်းမှာပင်…
“ဟဲ…ဟဲ…ဟဲ….စိတ်မဆိုးပါနဲ့ အစ်ကို ဖောင်ပြည့်သွားလို့ပါ….”
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 5,458
← အွန်လိုင်းမှ ရွှေနဖူးစာ